चुनावमा ५० लाख भोट र १२० सीट ल्याउनुपर्नेछ – Kite Sansar
चुनावमा ५० लाख भोट र १२० सीट ल्याउनुपर्नेछ
‘नदी बग्दै जाँदा फोहोर किनारातिर धकेलिन्छ, पिलो निचोर्दा शरीरको तौल घट्दैन’
केपी शर्मा ओली, (प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष )
हामी नयाँ पार्टी जीवनतर्फ अगाडि बढ्दैछौं । अहिलेसम्म विधिवत पार्टी एकता विभाजित छैन । हामी पार्टी विभाजन गर्न पनि चाहदैनौं । निर्वाचन हुँदा पार्टी फुट्छ ? निर्वाचन हुँदा पार्टी फुट्नुपर्छ ? झन् एकजुट भएर बढ्नुपर्दैन ? मैले अस्तिको दिन प्रचण्डजीलाई भने- हामीले केही मिलाउन सकेनौं, अब निर्वाचनले मिलाउँछ कि ? निर्वाचनमा त हामी एकजुट भएर जानुपर्‍यो । हाम्रो शक्ति एकजुट भएर निर्वाचनमा लगाउनुपर्‍यो । आपसी अन्तरविरोधहरु टुंग्याउनुपर्‍यो । अब एकजुट भएर हामी निर्वाचनको काममा अगाडि बढौं । प्रधानमन्त्री बन्नु नै छ भने पनि चुनावबाट बन्ने होला नि त ? प्रधानमन्त्री म चुनावबाट बनेको हुँ । यसले हामीलाई एक ठाउँ पुर्‍याउँछ । अरु पार्टीहरु पनि सकेसम्म एकजुट हुँदैछन् । चुनावका लागि, चुनावको सामना गर्नका लागि ।
उहाँ (प्रचण्ड-माधव) हरु त मान्नुभएन । उहाँहरु बेग्लै संसारमा, बेग्लै सपनामा, कसले हालेको ब्याट्रीबाट चल्दै हुनुहुन्छ ? कसले दिएको पम्पबाट चल्दै हुनुहुन्छ ? मलाई थाहा छैन । तर, उहाँहरु यस धर्तीमा, यस धर्तीको भूमिमा, यस धर्तीको जगमा, कार्यकर्ताको जगमा र जनताको विश्वासको जगमा चलिरहनुभएको छैन । अहिलेको आवश्यकताको जगमा उहाँहरु चलिरहनुभएको छैन । अहिले देश र जनताको चाहना परिपूर्ति गर्न उहाँहरु चलिरहनुभएको छैन ।
तपाईंहरुलाई थाहा छ, ममाथि हमला कतिकति खेर हुन्छ ? मेरो आफ्नै जीवनमा, मेरो आफ्नै अनुभवमा भन्ने हो भने जब देशमा निरङ्कुश राजतन्त्र थियो, पञ्चायती व्यवस्था थियो, अधिनायकवादी शासन थियो, त्यसबेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि हामीले आन्दोलन शुरु गर्‍यौं । हमला भयो । मैले आफैं व्यक्तिगत तवरमा पनि झेल्नुपरेको छ भन्ने सुनाउनु छ ।
त्यसबेला हामीले आक्रमण सहनु पर्‍यो, मैले पनि जेलमा पनि बस्नुपर्‍यो । अरु साथीहरुले पनि बस्नुपर्‍यो । हामीमाथि हमला कतिबेला भयो भने जतिबेला हामीले जनताका लागि, देशका लागि एउटा निणर्ायक आन्दोलनको उद्घोष गरेर अगाडि बढ्यौं । त्यसबेला हमला भयो । त्यसपछिका दिनहरु पनि थुप्रै सम्झन्छु । तर, पछिल्लो समयको मात्रै कुरा गरौं ।
म प्रधानमन्त्री भएपछि नाकाबन्दीका विरुद्ध हामीले संविधान जारी गर्‍यौं । संविधान जारी गरेवापत हमला भयो । नाकाबन्दी हामीमाथि लगाइयो । नाकाबन्दीविरुद्ध हामीले डटेर सामना गर्‍यौं । त्यसबेला आलोचना र विरोध हामीविरुद्ध केन्दि्रत गरियो । देश बर्वाद भयो, नसक्ने ठाउँमा सिङ जुधाउन गयो । छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध बिगार्‍यो…. हामीले सम्बन्ध बिगारेको थिएन । हामीले त नाकाबन्दी भोगिरहेका थियौं र त्यसका विरुद्ध भोको पेटमा सामना गरिरहेका थियौं । तर, पनि हाम्रो राष्ट्रको सम्मान, सार्वभौम सत्ताका लागि लड्दा देशभित्रै आलोचना गर्ने व्यक्ति थिए । हाम्रै पार्टीका शीर्षनेताहरुले एउटा व्यक्तिको दुर्बुद्धिको कारणले, बोल्न नजानेर देश नै अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति भयो, अब नेतृत्व फेर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक ढंगले बोलेर अभियान थाल्नुभयो ।
म कमरेडहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु- देशका त्यति दृढताका साथ, त्यति स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ, केही हुँदैन क्यारे यो देशमा भन्ने ठाउँमा जनताका सपनाहरु, ओइलाएका सपनाहरु जगाएर, विकासको एउटा लहर चलाएर, राष्ट्रिय भावना जगाएर, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाएर, देशलाई एक लय र एक तालमा समृद्धिको बाटो अगाडि बढाउने त्यो सरकार, त्यति उपलब्धीका साथ अगाडि बढेको सरकार गिराउनेमा हाम्रै पार्टीका नेताहरु भएका र अविश्वासको प्रस्तावमाथि बोल्दा अविश्वासकै प्रस्तावको समर्थनमा पो बोले आफ्नै पार्टीका नेताहरुले । त्यो कुरा पनि मलाई सम्झना छ । हाम्रै सांसदहरुको शीर निहुरिएको थियो, त्यतिबेला । त्यो थाहा छ ।
एउटा समूह पृथकतावादी राजनीति लिएर हिँडिरहेको थियो । त्यस समूहलाई हामीले संविधानसम्मत राजनैतिक संवैधानिक, शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा, राष्ट्रिय एकताको मूलधारमा ल्याउन सफलता प्राप्त गर्‍यौं । त्यसबेला पनि विरोधको सामना गर्नुपर्‍यो । यो के षडयन्त्र हो, त्यस्ताहरुलाई किन मञ्च दिइयो ? आदि इत्यादि । एउटा पृथकतावादी राजनीतिको अन्त्य गरेर राष्ट्रिय मूलधारको राजनीति अगाडि बढ्दैछ भने त्यसमा मन पोल्नुपर्ने कारण के ? कलेजो जल्नुपर्ने कारण के ? तर, केही मान्छेहरु जल्यो । पृथकतावादको अन्त्य हुँदा रुवाबासी गरे केही मान्छेहरु ।
उहाँहरुले अहिले सफल भएको ठान्नुभएको छ । म सुन्दैछु केपी ओलीलाई निकाल्नुहुन्छ रे । उहाँहरुले भन्दा १० वर्ष अगाडि पार्टी सदस्यता मैले लिएको होला । एउटा आन्दोलन सुरु गरेर जतिबेला आन्दोलन टुक्राटुक्रा, धुजाधुजामा थियो, त्यसअवस्थामा एकता एकीकरणको अभियान थालेर आएको मलाई आज … ताजुब के भने प्रचण्डले मलाई निकालिदिने रे पार्टीबाट । म साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु, हामी यस्ता कुराहरुमा अल्झिदैनौं ।
कमरेडहरुलाई लाग्ला, केही साथीहरु त आएनन् । त्यस्तो हुन्छ आन्दोलनमा । हुँदोरहेछ । हामीले नचाहेको, भरसक सबै साथीहरुलाई अगाडि लिएर बढौं भन्ने सोचेको । तर, उहाँहरु प्रधानमन्त्री पनि वामपन्थी देख्नै नसक्ने । उहाँहरुको राजनीतिक दृष्टिकोण छैन । वर्गीय दृष्टिकोण छैन । आन्दोलनको दृष्टिकोण छैन । आफ्नो पद, आफ्नो लाभ, आफ्नो हित मात्र छ । अघिल्लोपटक मैले नेतृत्व गरेको सरकार ढलाउनु किन पर्‍यो ? उहाँहरुसँग जवाफ छ ? उहाँहरुसँग कुनै जवाफ हुन सक्दैन । अहिले आएर उहाँहरु भन्नुहुन्छ, अघिल्लो सरकार लोकप्रिय थियो । लोकपि्रय थियो भने ढालेको किन त ? उहाँहरु नै हो ढाल्ने । अलिपछि उहाँहरु भन्नुहुन्छ, अहिलेको सरकार लोकपि्रय छ, त्यतिबेलाको चाहिँ भएन ।
पार्टी चल्न सक्ने अवस्थामा थिएन कमरेडहरु । हामीले चाहेर के गर्ने ? अहिले पनि चाहेका छौं । उहाँहरुले जस्तो कसैलाई निस्कासन गरेर कुदिरहेका छैनौं । उहाँहरु यति उपद्रो गर्दै हुनुहुन्छ, यति अन्तरघात गर्दै हुनुहुन्छ, वामपन्थी आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्न कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै बिग्रहको खेती गरिरहनुभएको छ । तर, पनि हामी कसैलाई निकालिरहेका छैनौं । आफैं उहाँहरु किनारा लाग्दै हुनुहुन्छ । त्रिशुलीमा तपाईहरुले हेर्नुभएको होला, केही केही चिज नदीमा पर्‍यो भने त्यो बग्दै जाँदा किनारा किनारातिर लाग्छ । नदी बग्दै जाँदा फोहोरहरु किनारातिर धकेलिँदै जान्छ र सफा हुँदै अगाडि जान्छ ।
हामीले एकीकरण गर्‍यौं । तीन महिनाभित्र एकीकरणको काम टुंग्याउने निर्णय गरेका होइनौं ? त्यो तीन महिना कहिले आउँछ ? त्यतापटि्ट कहिल्यै ध्यान गएन । दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनेका हौं । गएको जेठ ३ गतेभन्दा उतै महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । सम्भवतः विधानको धारा १७ मा होला । तर, महाधिवेशन गर्नेतर्फ कुनै सोच छैन । कुनै चिन्ता छैन । तयारी छैन ।
भुँइचालो जाँदा हामीले कार्यकर्ता परिचालन गर्ने । अरु पनि पार्टी हुँदा त्यसबेलाको सरकारले पनि केही पनि गर्न सकेन । तर, हामीले हाम्रो कार्यकर्ता पंक्ति परिचालन गरेर आफैं एक कप चिया पनि खान नपाउने नियमका साथ बढो अनुशासित ढंगले एक महिनको अभियान चलायौं । २७ हजार २ सय ७६ वटा अस्थायी टहरा बनाएर हामीले जनतालाई हस्तान्तरण गर्यौं । धेरै स्कुल भनौं न, लगभग १३ हजार विद्यालयहरु निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्यौं । २२ हजार हामीले भग्नावेशहरु सफा गर्ने काम गर्‍यौं । जनतालाई अप्ठ्यारो परेका बेला ती कामहरु पार्टीले गर्न सक्छ । त्यस्ता राहतको काम गर्न सक्छ । तर, अहिले पार्टी यत्रो कोभिड १९ को बिगबिगी छ, पार्टी केही गर्न सक्दैन । केही गर्न सक्ने अवस्थामा, कार्यकर्ता परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा पार्टी छैन । विरोध मात्रै गर्न सक्ने जस्ता विभिन्न प्रचारवाजीमा । टेलिभिजनमा गयो सरकारको गाली गर्ने । पत्रपत्रिकामा गयो सरकारको गाली गर्ने । रेडियोमा अन्तर्वार्ता दियो सरकारको गाली गर्ने । यसैमा समय खर्च गरिरहेको छ ।
चुनावमा हामीले कम्तिमा ५० लाख लोकपि्रय भोट ल्याउनुपर्ने छ । समानुपातिकमा यति ल्याउनु छ । त्यो ५० लाख भोट हामीले ल्याउनु छ । हामीले दुई पार्टी मिलेर ११६ सिटमा जितेका थियौं । ११६ सिटमा जितेका थियौं भने अहिले त्यसमा ४ सिट थप्नु पर्ने छ । १२० सिट पुग्नु पर्ने छ ।
हामी राजनीतिमा इमान्दारिताको तागत देखाउँछौं । र, राजनीतिलाई तदनुसार सफल राजनीति, स्वच्छ राजनीति, इमानको राजनीति, देशभक्त राजनीति, लोकतान्त्रिक राजनीति, विधिको शासन भएको राजनीति, देश र जनताको हितमा केन्दि्रत भएको राजनीति, यो राजनीति अगाडि बढाउँछौं र सफल हुन्छौं ।
देशभक्ति मनमा नभएका, लोकतान्त्रिक चिन्तन नभएका, देश र जनताबारे कहिल्यै नसोच्ने, आफू, आफ्नो परिवार । खासगरी तीन प पद, पैसा र परिवारबारे मात्र सोच्नेहरुको हातमा देश सुम्पिन सकिँदैन । त्यसकारण विघटनमा जानुपर्‍यो ।
अब यसपछिको परिस्थितिको हामीले कसरी सामना गर्ने ? उनीहरुले निहुँ त अगाडिदेखि खोजिरहेकै थिए, अब झन उनीहरुले निहुँ बनाउँछन् । त्यो निहुँ बनाएर पार्टी विभाजन गर्न खोजिरहेका छन् र प्रयास गरिरहेका छन् । परामर्श पनि नगरेर अध्यक्षलाई निस्कासन गर्ने आदि इत्यादि गरिरहेका छन् । महाधिवेशन गर्नुपर्ने, गरिरहेका छैनन् । त्यतापटि्ट लागिराखेका छैनन् । त्यसैले आगामी अभिभाराहरु पूरा गर्न सक्ने गरी कमिटीलाई थपेर विस्तार, अर्को भाषामा भन्ने हो भने पुनर्गठन गरेर विस्तार हो यो ।
तपाई‌ंहरुले देखिहाल्नुभयो, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सबैलाई बोलाइएको छ, केही आउँदैनन्, उतै बैठक बसेका छन् । यसखालको अराजक स्थितिमा आन्दोलन जोगाउनका लागि को कतापटि्ट बस्छ, छोडिदिऊ हामी । आन्दोलन जोगाउन मैले केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य विस्तार गरेको छु ।
अहिले हामी विशेष परिस्थिति, विशेष अभिभारा र विशेष अभियानमा भएको हुनाले हामीले कमिटीलाई अलिकति ठूलो पनि बनाउनुपर्‍यो । एकथरी मान्छेहरू विभाजनका लागि उद्दत छन् । त्यस कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्‍यो । विभाजित भएर छुट्टयिो नै भने पनि आन्दोलनलाई कमजोर हुन नदिने गरी अगाडि बढ्नुपर्‍यो ।
भइरहेका कमिटीबाट एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्न र एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्न पनि सम्भव छैन । यी कमिटीहरूको कार्यविधि सहमतिको बाटोबाट कार्यसम्पादन गर्ने भन्ने छ । तर, यिनले कहिल्यै सहमतिको बाटो समातेनन् । समात्न सफल भएनन् । बरु झमेला सिर्जना गर्ने तत्वहरूको चंगुलमै कमिटीहरू फसिरहे । केही तत्वले समस्या सिर्जना गर्ने र त्यही समस्यामै कमिटीहरू रुमलिने भइरह्यो । त्यो समस्यालाई छिचोलेर अगाडि जान नसक्ने भयो । त्यो विवशताबाट कमिटीलाई मुक्त गर्नका लागि संख्या थप्नुपर्‍यो ।
पार्टी नेतृत्वको लगातार अनुचित र निराधार विरोध भइरहने, अनेकौं झूठा, निराधार र घिनलाग्दा आरोपहरुसहित नेतृत्वलाई खुइल्याउने र विस्थापित गर्ने प्रयासहरु भइरहँदा त्यस प्रकारका पार्टीलाई नोक्सान पुर्‍याउने र विपक्षीलाई फाइदा पुर्‍याउनेखालका कामलाई मौजुदा कमिटीले रोक्न सकेन ।
विभिन्न समयमा चर्काे माग उठ्दाउठ्दै पनि कमिटी निर्माणमा सन्तुलनको पक्षलाई ध्यान नदिएको र ध्यान दिन मानिएन । यसमा सकारात्मक ढंगले क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्ने र त्यसमा विलम्ब गर्नु उचित नहुने भएकाले पार्टी र पार्टी मातहतका संरचनाहरु पार्टीले लिएका उद्देश्य, नीति र कार्यक्रम एवं कार्ययोजनाहरु कार्यान्वयन गरी उपलब्धि हात पार्ने माध्यम र औजारहरु, ती पार्टी र आन्दोलनका साधनहरु एवं विभिन्न अप्ठ्यारा मोड पार गर्दै पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउन नेतृत्व गर्ने नेताहरु, पार्टीको प्रथम अध्यक्षको हैसियतले पार्टीको मौजुदा कमिटीमा आवश्यक संख्या थपी यसलाई सुदृढ, सन्तुलित र गतिशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखी मौजुदा केन्द्रीय कमिटीमा कमरेडहरुलाई समावेश गरी हालको संख्यामा ५५६ जना थपी एक हजार ३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको प्रस्ताव गरेको छु ।